'Turullee namni kan jaaallatu yoo hojjete ni milkaa'a' - BBC News Afaan Oromoo
'Turullee namni kan jaaallatu yoo hojjete ni milkaa'a'
Image copyright MILENA GASHAW
Goodayyaa suuraa Mileenaa Gaashawu
Mileenaa Gaashawu kutaa keessa hojjetuu keessatti qofa osoo hin taane guutummaa waajira hjjettuufi sadarkaa amma irra jirtu kanarra ga'uudhaaf bara barnootaa keessa dabarte keessatti namni gurraachi, dubartiin, kan Afirikaa, akkasumallee Itoophiyaarraa taate ishee qofaadha.
Sadarkaa amma irra geesse kana dabalatee yeroo boqonnaasheetti ogummaawwani fakiifi kalaqa adda addaa akka hojjettu BBC'tti himteetti.
Abbaan Mileenaa Obbo Gaashawu ogummaan Arkiteektii kan turan yommuu ta'u dandeettii fakii kaasuu isaan qaban akka dinqisiifattu dubbatti. Yeroo ijoollumaashees akka ishee barsiisaniifis kadhachuu turuushee dubbatti Mileenaan.
Yeroo sanatti maqaan abbaashee kanaaf kennamu yeroo argaa turtetti jibbuun fedhii sana dhiiftee ogummaa biraa akka filatte dubbatti. Ts'us garuu jaalalli fakii kaasuuf qabdu garuu keessasheetii du'uu akka hin dandeenye dubbatti Mileenaan. "Waggaa 30 boodha waanti keessakootti hafe yoo jiraate jedhee barbaadee gadi baasuu kanan danda'e," Mileenaan You tube gargaaramuun fakii kaasuu ofiin of barsiisaa.
Goodayyaa suuraa Hojii kalaqa Mileenaa
Jalqabbiin Mileenaa kompiitera abbaashee akka ta'ee ta'uu heertee, abbaanshee waan ishee gammachiisu akka hojjettuuf jajjabeessaa akka turaniifi hojiin saalaan akka hin daangeffamnes barsiisaa turuu dubbatti.
"Abbankoo gommaa jijjiiruu, mana halluu dibuufi waantota gara garaa hiiikanii hidhuu na barsiisu turan. Ani garuu yeroo sanatti hojii dhiiraa maaliifa ana hojjechiifta yoo barbaadde dhiira dhalchi yeroon jedhu natti dheekkama ture," jetti.
Yeroo kompiiterri Itoophiyaa keessatti hin argamnetti Mileenaan kompiitera abbaasheetiin taphataa kan turte Mileeenaan, barnootaaf Ameerikaa deemtee kompiitera barachuun ala waanti ishee gammachiise hin turre. Kanumaanis suutuma suutaan gara sooftiweerii misoomsuutti of guddisuushee dubbatti Mileeniyaan. ''Yeroo jalqabaa baayyee cimaa ture. Kan cimus barumsa osoo hin taane yeroo baayyee qofaa ta'uudha. Dubartii qofaa. Dubartii gurraattii tokkittii. Dubartii Afrikaa tokkittii. Dubartii lammii biyya biraarraa dhufte ana qofaa waan turee waan anii waan tokko hin beekne itti fakkaata ture," jetti.
Ofitti amanamummaan qabdi ture waan ishee gargaareefis barnootashee itti fufuun akka eebbifamtu akka ishee gargaare dubbatti. "Hojii kalaqaa waanan jaaladhuuf 'software development' baayyeen jaaladhe" jetti.
Erga eebbifamtee booda hojii gara garaa hojjechuushee kan dubbattu Mileenaan waggoota shanii asitti Hoggantuu Pirojektii Misooma Sooftiweerii kan Riseervii Federaala Ameerikaa taatee hojjechaa jirti.
Akkuma nama kamiiyyu qormaataan dandeettiisheetiin hojii kana akka argatte kan dubbattu Mileenaan, ammallee bakka kanatti dubartii tokkittii gurraattii, Afirikaafi Itoophiyaarraa ta'uusheetti akka boontu dubbatti.
Goodayyaa suuraa Intalli Mileenaa dabareesheetiin ijoollee biroo yeroo qayyabachiiftutti
Ijoolleenshee jajjaboo akka ta'an kan dubbattu Mileenaan ijoolleen durbaashee lamaan akka Saayinsiifi Tekinooloojiitti bobba'an jajjabeessuuf duubatti akka hin deebines dubbatti.
Ijoolleenshee 'kids to kids' kan jedham 'ijoolleen ijoolleef' akka jechuuti, qopheessuudhaan yeroo murtaa'e walitti qabamuudhaan walgargaaru.
Waan hunda caalaa odeeffannoo waliif darbarsuun guddina hawwaasaaf barbaachisaa ta'uu kan dubbattu Mileenaan, " Walii walii keenya walgargaaruun gaariidha" jetti.
Mileenaan gara fakii kaasuutti waggaa 30 booda deebiyuushee nutti himteetti.
Sanbata tokkorra fakii waraqaarratti yaaltu 'Kaanvaasiirratti' yeroo hojjettee miidiyaa hawwaaasumaarratti gadi dhiifte. Bulee bariisaa yaadonni dhufaniif kan nama gammachiisaniifi jajjabeessan ta'uun olitti namoonni fakii isheen kaaste kana namni arge jaallate tokko akka bitachuu barbaadu itti hime. Achumaanis yerooma sana maallaqa ittiin bitatus galii akka godheef dubbatti.
''Nan na'e! Gara fuula duraatti tarii waggoota shaniin booda gurguruun danda'aa malee ammatti nan gurgura jedhee hin yaanne."
Goodayyaa suuraa Fakiiwwan Mileenaa Kuusaa Ameerikaatti uummataaf dhiyaataniiru
Dorgommii waajirasheetti dhiyaaturratti fakiiwwan sadii dhiyeessitee lamaan mo'achuushee dubbatti. Namoonni ishee waliin dorgomanis muuxannoofi gummaa fakii kaasuu guddaa akka qaban dubbatti, Mileeniyaan.
Hojiinshee kun Kuusaa federaalaatti filatamee ji'a ja'aaf uummataan akka daawwatamuuf dhiyaateera jetti.
Mileenaan fedhiifi dandeettii kalaquu sooftiweeriiirraa gara Kanvaasiittii deebisteyyu fakii kaasuu qofaarratti akka hin murtaa'iin dubbatti.
Hojii suuraa kaasuu, suphee/seraamikiifi giraafiksii kkf akka hojjettu dubbatti.
Gara fuula duraattis hojiiwwan ishee kana walitti qabuun agarsiisa qopheessuuf karoorfataa jirti. Suuta suutaanis hojiiwwan 60 ta'an qopheeffachuutti jirti.
Goodayyaa suuraa Hojiiwwan kalaqa Mileenaa Gaashawu
"Yeroo baayyee waan jaallannu hojjechuurraa kan nu dhowwu sodaadha. Kanaaf, namni waan hojjechuuf jaallatu ija jabinaan jalqabuu qaba; yoo xiqqate carraaquu qaba sababiin isaas faayidaa kan qabuufi kan nama gammachiisu waan ta'eef,'' jetti Mileenaan.
Mormiin magaalaa Wondoo Gannat namoota sadi galaafate
Arba Keeniyaa karaan jalaa badee burjaaja'aa jiran